Billy Bishop Gagada Diyaaradaha ee Magaalada Toronto si ay dib ugu bilawdo adeegii duulimaad ee ganacsiga bisha Sebtember 8
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Billy Bishop Gagada Diyaaradaha ee Magaalada Toronto si ay dib ugu bilawdo adeegii duulimaad ee ganacsiga bisha Sebtember 8
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Adeegga diyaaradaha ganacsiga ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyay garoonka diyaaradaha Billy Bishop bishii Maarso 2020, taasoo ka dhalatay saameynta ay ku yeelatay COVID-19 masiibo caalami ah iyo xannibaadaha safarka ee la xiriira
Faafa kahor, Billy Bishop Airport wuxuu soo dhoweeyay qiyaastii 2.8 milyan oo rakaab ah sanadkii, wuxuu taageeray in kabadan 4,700 shaqooyin, wuxuuna kasbaday $ 470 milyan GDP.
Porter Airlines waxay wajihi doontaa adeegyadeeda loo qorsheeyay inay ka timaado / ka timaado Toronto, iyadoo duulimaadyo ka bixin doonta / tagi doonta Montreal, Ottawa iyo Thunder Bay bisha Sebtember 8.
Air Canada ayaa sidoo kale la filayaa inay dib u bilowdo adeeggeeda Montreal bisha Sebtember.
PortsToronto, milkiilaha iyo hawl wadeenka Diyaaradda Billy Bishop ee Magaalada Toronto, wuxuu ku faraxsan yahay inuu xaqiijiyo in adeegga duulimaadyada ganacsiga ee ka tagaya / ka soo dagaya garoonka diyaaradaha ee magaalada ay dib u bilaabi doonaan Sebtember 8, 2021, iyadoo dib loo shaacin doono dib u bilaabista shirkadda diyaaradaha ee Porter Airlines maalintaas. Shirkadda Porter Airlines waxay wajihi doontaa adeeggeeda loo qorsheeyay inay u socoto / ka tagto Toronto, iyadoo duulimaadyo ka bixin doonta / tagi doonta Montreal, Ottawa iyo Thunder Bay Sebtember 8, iyada oo siddeed meelood oo kale la keeni doono internetka usbuuca Sebtember 13. bisha Sebtember sidoo kale.
“PortsToronto waxay ku faraxsan tahay inay xaqiijiso in Billy Bishop Airport ay dib u bilaabi doonto howlihii duulimaadyada ganacsiga bisha Sebtember 8, 2021, waxayna bilowday howsha dib u soo celinta shaqaalaha, diyaarinta garoonka diyaaradaha, iyo tirinta maalmaha ilaa aan soo dhaweynayno dadka safarka ah si aan u guuleysanno oo aan u abaalmarinno. - helitaanka garoonka diyaaradaha, ”ayuu yiri Geoffrey Wilson, Madaxa Fulinta ee PortsToronto. “Billy Bishop Airport waa hanti magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda iyadoo la siiyay saameynta ay ku leedahay taageeridda dhaqaalaha, fududeynta ganacsiga iyo dalxiiska, iyo kumannaan shaqooyin ah. Billy Bishop Airport wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa dib u soo kabashada dhaqaalaha ee magaaladeena iyo gobolkeena, waxaanan ku faraxsanahay inaan kor u qaadno howlaheena isla markaana aan dib ugu laabano ganacsiga isku xirka dadka safarka ah dadka, meelaha, khibradaha iyo shaqooyinka ay jecel yihiin. ”
Adeegga diyaaradaha ganacsiga ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyay garoonka diyaaradaha Billy Bishop bishii Maarso 2020, taasoo ka dhalatay saameynta ay ku yeelatay COVID-19 masiibo caalami ah iyo xannibaadaha safarka ee la xiriira Gegada dayuuraduhu way furnaayeen inta lagu gudajiray aafada si loo hubiyo in lasii wado howlaha Ornge medevac, iyo in loogu adeego shirkadaha gobolka sida FlyGTA iyo Cameron Air, duuliyeyaasha guud ee duulimaadyada, iyo hawlwadeenada dalxiiska sida Helitours.
Faafa kahor, Billy Bishop Airport wuxuu soo dhoweeyay qiyaastii 2.8 milyan oo rakaab ah sanadkii, wuxuu taageeray in kabadan 4,700 shaqooyin, wuxuuna kasbaday $ 470 milyan GDP. Gegada diyaaraduhu waxay rajeyneysaa inay ku soo laabato heerarkan adeegga iyo saameynta togan. Safarka diyaaraduhu wuxuu durba bilaabay inuu dib ugu soo laabto suuqyo badan oo adduunka ah, iyadoo Mareykanka uu soo sheegayo inuu dib ugu laabtay 65 boqolkiiba heerarka cudurrada faafa bishii Maajo 2021, iyo rajooyinka laga qabo koritaan dheeri ah maaddaama xagaagu soo dhowaanayo.
Gegada diyaaradaha Billy Bishop waxay bilawday bilihii la soo dhaafay Barnaamijkeedii Safarka Badbaada si loogu diyaariyo garoonka diyaaradaha iyo dadka socotaba ah baratakoolka cusub ee caafimaadka bulshada ee la xiriira safarka. Barnaamijkan waxaa lagu kaabayaa barnaamijyo lala wado mid kasta oo ka mid ah shirkaddiisa - Barnaamijka Duulimaadyada Caafimaadka ee Shirkadda Porter Airlines iyo barnaamijka 'Clean Canada' ee Air Canada.